वामदेव चुनाव लड्ने निर्णय भएको छैन्, रामबीर मानन्धरले राजिनामा दिन जरुरी छैन् : मन्त्री महासेठ (भिडियो सहित)
‘यो ८ महिनामा सरकारले ईतिहाँसमै सम्झना हुने काम गरेको छ’
‘यदि वामदेवले चुनाव लड्ने हो भने नेकपाका निर्वाचित सांसद जो पनि छोड्न तयार छौं, म पनि तयार छु’
अहिले माननीय सांसद रामबीर मानन्धरले राजिनामा दिने भनेर भन्नुभएको छ । तर, राजिनामा दिनुभएको छैन । र, उहाँले राजिनामा दिन जरुरी पनि छैन् ।
जबसम्म पार्टीको निर्णय हुँदैन्, तबसम्म राजिनामा दिन जरुरी छैन् । पार्टीले निर्णय गर्यो भने म पनि छोड्न तयार छु । पार्टीले निर्णय गरे हामी जोसुकै निर्वाचित सांसदपनि छोड्न तयार छौं । हाम्रो पार्टीको निर्णय अगाडि व्यक्तिको केही चल्दैन् ।’
मित्रराष्ट्र चीनको आर्थिक समृद्धिको उदाहरण पेश गर्दै मन्त्री महासेठले भने,‘चीनलाईपनि अहिलेको यो अवस्थामा आईपुग्न ४२÷४३ वर्ष लाग्यो । साईप्रसलाईपनि अहिलेको अवस्थामा आईपुग्न ३५ देखि ४० वर्षसम्म लाग्यो । मलेसियालाई त्यस्तै १८ देखि २० वर्षसम्म लाग्यो ।
हामीले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु ५ वर्षभित्र पूरा गरेर देखाउँछौं । अहिले ६ महिनाभित्रै सबै पूरा हुने कुरा होईन् । केही समय लाग्छ ।’
सरकारको कामप्रति असहमति जनाउँदै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसदमा बोलेको कुराप्रति टिप्पणी गर्दै महासेठले भने,‘संसदमा उहाँले नेताभन्दापनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले बोल्नुभएको छ । उहाँले बोलेको ठिक की बेठीक भनेर म अहिले टिकाटिप्पणी गर्न चाहँन्न ।
किनकी टिकाटिप्पणी गर्ने हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ । हामी अहिले एउटै कमिटीमा बसिरहेका छौं । उहाँले ठिक बोल्नुभयो या बेठीक बोल्नुभयो भनेर यसबारेमा म आफ्नै कमिटीमा कुराहरु उठाउनेछु ।
तर, जुन कुरा संसदमा उठ्यो, चाहे उहाँमार्फत होस या अरुमार्फत, देशमा सरकार छ भनेर जनताले महशुस गरेनन भनेर । हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जनताप्रति बडो दृढताकासाथ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहनुभएको छ। यो सरकारले जनतासामू गरेका सबै प्रतिबद्धताहरु समयमै पूरा गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
उनले विकासको दृष्टिकोणमा आफूहरुले धेरै नयाँ–नयाँ योजनाहरु ल्याएकोपनि दाबी गरे । महासेठले भने,‘विकासको काममा हामीले धेरै फड्को मारेका छौं । १२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी राजमार्गको काम हामीले सुरु गरिसकेका छौं ।
अहिलेसम्म २२ वर्षदेखि बनाउन नसकेको हुलाकी राजमार्ग यो तीन वर्षभित्रमा हामी पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न गैरहेका छौं । म यही मञ्चबाट मिडियामार्फत नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई भन्न चाहन्छु की आगामी चुनावमा तपाईहरुले यही बाटो हिँडेर भोट चाहीँ माग्न सक्नुहुन्छ।’
सरकारले विकास र यातायातको दृष्टिकोणले दशैं तथा तिहारको अवसरमा मन्त्रालय र विभागहरुले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेकोपनि उनले सुनाए । उनले भने,‘यातायातको टिकटमा कालोबजारी चलेको भनेर हामीकहाँ रिपोर्ट छैन । हामीले प्रत्येक ठाउँमा कुन ठाउँको भाडा कति छ ? भनेर लिष्ट राख्न लगाएका छौं ।
त्यसपछाडि उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिहरुलाई राखेका छौं । प्रहरी र हाम्रो विभागका कर्मचारी मिलेर अनुगमन गरिरहेका छौं । काठमाडौंमा हामीले १३ वटा हेल्प डेस्कपनि बनाएर काम गरिरहेका छौं । र, मलाई विश्वास छ कि विगत वर्षहरुजस्तो यसपालाी त्यस्ता गुनासाहरु आउँदैनन् भनेर ।’
आफूहरु सरकारमा आउनेवित्तिकै नयाँ सरकारसँग समस्यै समस्या रहेको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘विगतको सरकारले गरेको कमिकमजोरीको कारणले ८ खर्ब रुपैयाँको दायित्व हामीमाथि थपिएको थियो । जुन हामीले स्वेतपत्रमार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरुको अगाडि ल्याईसकेका छौं ।
यो ७ महिनाभित्रमा हामीले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा चाहिने नियम, कानून बनाउने काम गर्यौं । सबै ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौं । सरकारको ध्यान अब विकास निर्माणतर्फ अघि बढेको छ । यो सरकार बनेको एक वर्षभित्र नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको अनुभुति पाउँछन ।’
फरक प्रसँगमा उनले अहिले तराई विभाजनको कुरा उठिरहेकोप्रति कडा टिप्पणी गर्दै भने,‘जनताबाट तिरस्कृत भैसकेका व्यक्तिहरु मधेशलाई म छुट्टै देश बनाउँछु भनेर दम्भ देखाएर हिँडिरहेको छ भने त्यसमा कुनै दम छैन् ।
छुट्टै देश बनाउँछु भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु, आउनुहोस चुनावको प्रक्रियाबाट तपाई जनताको बीचमा आउनुहोस्, जनताले तपाईलाई के हाल बनाउँछन्, अनि थाहा पाउनुहुन्छ । र, बनाईसकेका छन् । त्यसकारणले न तराई कहिले छुट्टै देश कहिले थियो, न छ, यो नेपालको अभिन्न अंग हो ।
रहिरन्छ । देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरुको पछाडि कुनैपनि मधेशी जनता जाँदैनन् । देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई मधेशी जनताले आगामी दिनमा के सजाय दिन्छ ? चुनावमा तपाईहरु हेर्नुहोला । सस्तो लोकप्रियताको लागि कसैले म नेपाल टुक्र्याउँछु भन्छ भने यसमा हामीले धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने जरुरीनै म देख्दिन् । किनकी त्यसमा कुनै सत्यता छैन्।’